Sports – Myanmar Photo News
Aung La win Machado after 56 Seconds in the first round
ONE: QUEST FOR GOLD held on 23 Feb 2018 at Thuwana Stadium. Aung La N Sang made quick work of Alexandre Machado. He also made ONE Championship history. Sang, already […]
February 24, 2018 February 24, 2018 myanmarphnews News, Sports
၂၀၁၈ ဆောင်းရာသီ အိုလန်ပစ် အားကစားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား […]
February 10, 2018 myanmarphnews News, Sports
ဗီယက်နမ်အသင်းကို အနိုင်ရပြီး မြန်မာအသင်း ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်
Credit-Kumudra မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပတဲ့ အသက် ၁၈နှစ်အောက် အာဆီယံချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ အုပ်စု(ခ) ရဲ့ အုက်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ် မြန်မာအသင်းနဲ့ ဗီယက်နမ်အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဗီယက်နမ်အသင်းက ပွဲအစ ၁မိနစ်မှာ ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာအသင်းက ဒုတိယပိုင်းမှာ ခြေပဂိုးနဲ့ အနိုင်ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲအပြီးမှာ ၂ဂိုး ၁ဂိုး ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ Photo-ဂျက်
September 14, 2017 September 14, 2017 myanmarphnews General, Photo, Sports
နောက်ကျသွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ ယူ ၁၈ အသင်း
မြန်မာယူ 18 အသင်းက ဗီယက်နမ်ယူ ၁၈ အသင်းကို မြတ်ကောင်းခန့်၊ လွင်မိုးအောင်တို့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့2ဂိုး 1 ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး မြန်ယူ ၁၈ အသင်း က ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ရောက်သွားပါပြီ။ 🇲🇲😁 Source : Facebook
September 14, 2017 September 14, 2017 myanmarphnews Local, News, Photo, Sports